ဒီကေန႕မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္သာသနာ့ေဘာင္ထဲကို ထပ္မံဝင္ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ စူးရွထက္ရဲ႕ဗီဒီယိုေလး…. – CELE WINGAGAR
ဒီကေန႕မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္သာသနာ့ေဘာင္ထဲကို ထပ္မံဝင္ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ စူးရွထက္ရဲ႕ဗီဒီယိုေလး….
July 18, 2021 100million Articles 0
ပရိသတ္ႀကီးေရ စူးရွထက္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေမာ္လ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စူးရွထက္ကေတာ့ ဒီေန႔ ဇူလိုင္လ (၁၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ သာသနာ့ေ ဘာင္ကို ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန သူ႔ရဲ့ပရိသတ္ေတြအတြက္မၽွေဝေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။
စူးရွထက္ကေတာ့ အခုတစ္ေခါက္နဲ႔ဆိုရင္ သာသနာ့ေဘာင္ကို ဝင္ေရာက္တာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ရွိေနခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။အခုတစ္ေခါက္မွာေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း သာသနာ့ေဘာင္ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေလးအျပင္ သူ႔ရဲ့ညီမအငယ္ေလးရယ္ တူမေလးႏွစ္ေယာက္ရယ္ကိုပါ သီလရွင္အျဖစ္ ဝတ္ေပးခြင့္ရခဲ့တာေၾကာင့္ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္းလည္း မၽွေဝေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါေသးတယ္။
ဆရာေလးဝတ္အေနနဲ႔လည္း သူတတ္နိုင္သေလာက္အလႉေတြကို လူဝတ္နဲ႔တုန္းကလိုပဲ လႉဒါန္းမႈေတြလည္း ဆက္လက္လႉဒါန္းသြားဦးမွာပါတဲ့။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ စူးရွထက္တစ္ေယာက္ ဒီေန႔မွာ သာသနာ့ေဘာင္ကို ဝင္ေရာက္သြားတဲ့ေၾကာင္းကို ဗီဒီယိုေလနဲ႕တကြ မၽွေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ပရိသတ်ကြီးရေ စူးရှထက်ကတော့ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မော်လ်ဒယ် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စူးရှထက်ကတော့ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၈)ရက်နေ့မှာတော့ သာသနာ့ေ ဘာင်ကို ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
စူးရှထက်ကတော့ အခုတစ်ခေါက်နဲ့ဆိုရင် သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်တာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်လေးအပြင် သူ့ရဲ့ညီမအငယ်လေးရယ် တူမလေးနှစ်ယောက်ရယ်ကိုပါ သီလရှင်အဖြစ် ဝတ်ပေးခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းလည်း မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ ပါသေးတယ်။
ဆရာလေးဝတ်အနေနဲ့လည်း သူတတ်နိုင်သလောက်အလှူတွေကို လူဝတ်နဲ့တုန်းကလိုပဲ လှူဒါန်းမှုတွေလည်း ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားဦးမှာပါတဲ့။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်အချစ်တော် စူးရှထက်တစ်ယောက် ဒီနေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်သွားတဲ့ကြောင်းကို ဗီဒီယိုလေနဲ့တကွ မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကြက်ပေါင်းရောင်းလို့ရတဲ့ အမြတ်ငွေနဲ့ ထမင်းဘူး (၁၀၀) ကို လိုအပ်သော နေရာတွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အောင်လေး
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံ ရပြီး အပြင်ထွက်ရန် ခက်ခဲ နေသူတွေ ကို လိုအပ် တာများ ကူညီ လု ပ် ဆောင်ပေးမယ့် မင်းသွေးခန့်…